DAAWO VIDEO:Buuq Ka Taagan Villa Soomaliya Imaraadka In Guud Ahaan Dalka Laga Mamnuuco Puntland Iyo Somaliland. - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
[ December 22, 2021 ] PSF OO WAR-SAXAAFEED SOO SAARTAY	Puntland
[ December 22, 2021 ] DAAWO VIDEO:Wararkii ugu Danbeeyey Boosaaso iyo Puntland oo Xabad joojin ku Dhawaaqday	Maqal Iyo Muuqaal
[ December 21, 2021 ] Rooble oo shaaciyey xilliga uu furmayo shirka Golaha Wada-tashiga Qaranka	Wararka Maanta
[ December 21, 2021 ] Duqa Muqdisho oo u jawaabay Midowga Musharrixiinta	Wararka Maanta
[ December 21, 2021 ] DAAWO :Puntland oo sheegtay in ciidanka Gorgor Soo Weerareen	Maqal Iyo Muuqaal
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO VIDEO:Buuq Ka Taagan Villa Soomaliya Imaraadka In Guud Ahaan Dalka Laga Mamnuuco Puntland Iyo Somaliland.
DAAWO VIDEO:Buuq Ka Taagan Villa Soomaliya Imaraadka In Guud Ahaan Dalka Laga Mamnuuco Puntland Iyo Somaliland.
January 1, 2020 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 3
Xili Qaraxii muqdisho lagu Tuhmey Magaalada Muqdisho waxaa Buuq badan ka taagan yahay In safaarada Imaraadka Iyo dhamaan Shaqada Soomaaliya Ka hayana Dalka Laga Saaro.
Madaxda sare ee dalka Ayaa kulamo Ugu Danbeeyey waxay ka lahaayeen Arinta Imaraadka Go’aanka Ugu danbeeya ee laga Qaadayo Xiligani waxay Noqonayso.
Halkani Hoose Video Daawo
Kheyre oo ku wareeray Xal uhelidda Siyaasadda Galmudug “Galmudug oo noqon doonta Caqabad aan dhamaad layahn oo saaran Villa Somalia”.
DAAWO VIDEO:Sir La Helay Nin Iyo Naagta Dowlada ka Tirsana Qaraxyo Muqdisho Dhamaan Fuliyey.
Maxaa buuqa dhaliyay? War dalkani waa waddan xor ah oo arrimahiisa diblumaasiyadeed ee caalamiga laga doonayo in uu si hufan u nidaamsado oo una maareysto. Waa maxay sawaxankani oo saluuggoodu badanaa?
Mashaqadu waxay ka askumatay Villa Muqdisho oo aan markeeda hore ba toos u meel marsanin oo qeexin hannaanka dawliga ah ee ay dalka la damacsan tahay. Waxaa hawada laga dhuganayaa xamxamta ah in madaxweynuhu uu hannaanka federaaliga ah sidiisa ba diiddan yahay. Waxaa se ka sii daran in haddii uu ku qanacsan yahay aan weli la qeexin federaalka la qaatay nooca uu yahay illayn waa kala jaad ee.
Ibtilada taagan baa ah in maadaama uusan hannaanka dawligu lignayn uu dhabaq weyn ku keenay hab dhaqanka diblumaasiyadeed ee uu dalku kula shaqeyn lahaa dalalka intooda kale oo uu jahawareer ku keenay nidaamkii wadashaqeeneed ee dawladda guud iyo maamullada ay ka kooban tahay.
Hannaanka oo la isla waafaqo ayaa sahli lahayd in dastuurka qaran la dhammeystiro, arrimaha dawliga la basariyo oo dalka qaybihiisa na loo kala cayimo waxsoosaarkooda u gaarka ah iyo habka ay maalgashiga caalamiga u kasban lahaayeen. Xasarad la’aan.
Waa sida ay ila tahay.
Dawladan ama Villa Xamar haka dhex buuqdo ama ha iska aamusnaatoba’e, waa saambiise laga eedaamey. Haku deyso gebigeeduba. Waxey sadexdii sanadood ee tegey ku qaban kari loogama fadhiyo iney bilaha yar ee u hadhsan ku qabato. Doorasho uun iney horgeliso ayaa looga fadhiyaa. Waaba hadey go’aankaas gaadhi kartee.
Farmaajo waxa uu noqdey Madaxweynihii markuu xilka qabtey dadku siiyeen kalsooni buuxda. Yididiilo iyo reyreyna ugu riyaaqeen. Aar Farmaajo ii geeya ayaa u hir gashey. Waxa uu heystey fursad uu mowjadaas uga faa’iideysto oo uu wax badan oo badan ku hir gelin karayay. Hadii uu mowjadaas qalbi wanaaga iyo kalsoonida shacabka ka faa’iideysan lahaa waxa hubaal ah inuu ka tegi lahaa taariikh wanaagsan oo aad u heer sareysa. Maxeyse kuugu taal. Anigu sidaan isleeyahay diyaar umuu aheyn kuraiga ugu sareeya Soomaaliya. Masuuliyadii loo dhiibey wuu gudan waayay. Mowjadiina wuu ku haftey.
Legacy ama taariikhda uu ka tegi doonaa waa mid murugo iyo Madow badan.
Waxa uu balan qaadey inuu umada Soomaaliyeed isku keeni doono. Wuuba sii kala firdhiyay. Maamul Goboleedyadii jirey ayuu mid walba dahaal tooa ah mid dadbanba ku qaadey. Beydhabo Xabashi ayuu u dalbaday oo ku laayay. Nin uu watona meeahuu geystay. Reer Beydhabo waa dadka ugu Dawlad kecel Soomaalida. Maanta wey kadoo horjeedaan. Hirshabeele wuxuu baday bahdilaad. Waarena dibi meel ugu xidhan ayuu ka dhigey. GalMudug Xaaf oonan afartiisii sano dhameysan ayuu ridey, welina waakaas Dawlad u sameyn Kari la. Puntland isagoon gaadhi Karin ayuu lacag u isticmaaley oo uu mawjado kusoo faruurey. Wey iska moseen. Dagaalkiisana wey ka gaashaanteen. Cadaawad aanu u baahneyn ayuu halkaas iskaga furey. Jubaland tuu ku dhigay waa laga wada dheregsan yahay. Axmed Madoobe’se gaashaanka ayuu Farmaajo iyo cayayaankiisaba u daruuray. Maanta waakaas ku khasbanaadey inuu khasan ku liqo Madaxweynenimada Axmed Madoobe. Farmaajo Danbiyada ugu foosha xun ee uu galey waa isagoo Jawaari ka takhalusay. Baarlamaankii umadana ka dhigey mid fadhiid ah oonan shaqaduu hayaba la aqoonin. Qalbi dhahax oo uu dhiibey. Waxa uu noqdey Madaxweynohii u horeeyay ee muwaadin Soomalliyeed dhiiba. Waxa uu weerarey siyaasiyiinta kasoo horjeeday oo uu dad ka laayay. Waxa uu uu weerarey xildhibaan xasaanad gurigiisa. Soomaaliya dadkeedii wuu sii kala fogeeyay.
Waxa kale ee uu balan qaadey inuu wadanka nabad ka dhigo doono. Alshabaana la hadli doono hadey diidaana la dagaalami doono. Maanta Alshabaab waxey cashuurka qaadaa dadka dekeda wax kala Soo dega.WashingPost ka eega maqaalka ay qortey ee ay ciwaanka uga dhogtey, hadaan lacagooda siin waayo wey I dilayaan ama If I don’t pay them they will kill me. Alshabaab waxey heshaa manifestooyinka ay KU qoran inta konteenar ee dekeda Xamar uga Soo dega ganacsiga. Hada iska dhaaf Zakada iyo cashuuraha kale ee ay ka qaadaan ganacsatada. Dekedii ay Dawladu gacanta ku heysay ayay cashuuraan. Xitaa xildhibaanada iyo shaqaalaha kale ee dawlada u shaqeeya ayaa cashuurtooda dhiiba si ay nafahooda u badbaadiyaan. Wasiir Beyle ayaaba. Qirtey inaanay waxba ka qaban karin cadhiirtan ay Alshabaab garab wado dawlada.
Wax walba oo dhaliil ah ama gef ah ama meel ka dhacah oo uu Farmaajo ku kacay waxa ugu xanuunka badani waa isgoo aamusni ugu darey. Dadyowga qaar waxey faas u macneysteen inu waxani ugu talo gal ka yahay Farmaajo. Amaba uu siyaasada doqon ka yahay oonu laheyn xirfad siyaasinimo oo uu kaga dabaasho mowjadaha badan ee siyaasadu la timaado. Siyaado asalkeedaba waa badwryn. Nimaan dabaasha aqoonina haduu dafyidhaahdo wuu ku haftaa ama wuu quusaa oo wey liqdaa. Kolkaas Farmaajo siyaasadii wey liqdey.
Waan idinka raali gelinayaa khaladaadka farta ee badan eenan wada sixi kareyn imika.